Home » blog » Talooyinka Fudud ee 10 ee Bilowga
Talooyin Wanaagsan ee Bilowga
Miyaad ka fekereysaa inaad bilowdid jadwalka jimicsiga? Marka ugu horeysa ee tagta jimicsiga? Isticmaal tilmaan-bixinnada 10 ee bilawga bilowga ah si aad u hubiso inaad gaarto hadafyadaada.
1. Samee Tababarkaaga Wanaagsan
Haddii aad rabto in aad ka hesho inta ugu badan tababarkaaga, waxaad u baahan tahay inaad maskaxda ku hayso in 80% natiijooyinka aad ka hesho tababarkaaga dhab ahaantii waxaad ka timaadaa 20% dakhligaaga.
Taas macnaheedu waa in saacad saacad, kaliya daqiiqadaha 12 ee tababarka ayaa ka qayb qaadan doona inta badan natiijooyinkaaga. Waxaad ubaahan doontaa inaad sameyso daqiiqadaha dhabta ah. Isticmaal dhaqdhaqaaqyo isku dhafan oo ka shaqeeya wax ka badan hal koox oo muruq goor wakhti si aad uga faa'iidaysato wakhtigaaga.
2. Had iyo jeer xasuuso inaad caafimaadto
Hadafyada jilitaanka jirka oo dhan ayaa lagu gaari karaa oo keliya marka la cuno cunto caafimaad leh. Haddii aad u socotid jimicsiga si aad u tagto guriga oo aad cunto cuncunka labajibbaaran leh ee 2-qof ee adeega sheyga Faransiiska ah, ma samayn doontid jirkaaga nasiib wanaag. Marka aad tagto dukaanka, iibso cunto fudud oo caafimaad leh halkii laga cuni lahaa cuntada qashinka ah.
Waa in aad u aragtaa in aad cunto ku dhexjirto, oo maskaxda ku hay in haddii aad gubatay kalooriyo badan, waxaad u baahan tahay in aad wax yar cunto si aad u hubiso in aad leedahay tamar kugu filan inta kale ee maalinta ah. Isu dheellitir nafaqadaada oo iska ilaali cuntada diiran.
3. Isbedelkaaga Cunnooyinkaaga
Waa inaad hubisaa inaad si fiican u cuntid iyo sidoo kale cun cunno caafimaad leh. Cuntada si habboon u cunida waxaa ka mid ah cunista wakhtiyada saxda ah ee maalinta. Quraac la'aanta waa fikrad aad u xun oo aanad cuni karin goor dambe habeenkii. Cunista dambe ee habeenkii ama marka aad caajisid waxay keenaysaa in la isticmaalo kalooriyada aan loo baahnayn. La hadal tababare shakhsi ah oo ku saabsan waxa kuu faa'iidi doono si aad u gaarto hadafyadaada.
4. Qorshee jimicsigaaga jimicsiga
Si aad u hubiso inaad ogtahay markaad rabto inaad tabobarto iyo markaad sugi karto wakhtiga soo kabashada, waa inaad dhab ahaan qorshe u samaysaa. Xasuuso inaad ku darto maalmo nasasho oo aad macquul u tahay inta uu le'eg yahay waqtiga aad haysato.
Xusuusnow inaad joogtid jadwalkaaga sida ugu macquulsan si aanad u helin caado-jabka musqusha. Isku dhejinta jimicsiga marar badan waa caado xun. Ma awoodi doontid inaad gaarto hadafyadaada haddii aad caado ka dhigto maqnaanshahaaga.
5. Samee 100% Ballanqaadka Jimicsiga
Waa inaad xusuustaa in isbeddelka jirkaaga uu u baahan yahay inaad dhammays-tirto. Waad ka boodi kartaa maalin ama laba mar mar, sababtoo ah waxaad dareemeysaa inaad u qalantid maalin fasax ah. Qorshee marka nasashadaadaadu ay noqon doonto oo ku dhegan tahay. Xitaa haddii aad leedahay safar qorsheysan, booqo jimicsiga xaafadda, oo hubi inaad saacad ka qaadato maalin kasta si aad uga shaqeyso. Iskaga ilaali cuntooyinka caafimaadka leh sidoo kale.
6. Ha ogolaanin dareenkaadu inay kaa saarto
Haddii aad tahay qof dumar ah oo isku dayaysa in ay lumiso miisaanka oo ay horumariso muuqaal caan ah iyo xajmiga, waa sahlan tahay in la eego haweenka jidh-dhiska iyo si lama filaan ah argagax.
Xaqiiqadu waxay tahay in ay tahay wax aan suurtagal ahayn in haweenku ay u badan yihiin sidan; waxay u baahan tahay qorshe iyo dadaal gaar ah. Ma khaldami doontid haddii aad ku dhejisid barnaamijka uu tababarahaaga shakhsi ahaaneed ku siiyey.
7. Ku dhaji Qaybta asaasiga ah
Waa inaad xasuusnaato in aad kaliya ka bilaabeyso jirdhiska. Si looga fogaado dhaawaca iyo inaad iska ilaaliso inaad iska joojiso tababarkaaga, waa inaad hubisaa in aad iskaa u ogaato laylisyada aasaasiga ah.
Ka bilow kalfadhiyada qaar ka mid ah kadibna sii kobcinta barnaamijkaaga tababarka marka aad noqoto mid kalsooni leh iyo heerka jirdhiskaagu uu bilaabmayo inuu kaco.
8. Isu Diyaargarowga Joogtadaada Cusub
Iska hubi inaad adigu u diyaar garowdo tababarka oo aad leedahay qorshe adag oo ku saabsan sida aad u jeceshahay inaad jimicsigaaga aado. Waa inaad la timaadaa ujeedooyinka dhabta ah, sidoo kale haddii aad rabto in aad leedahay shaybaarka 6, waxaa loola jeedaa in lagu gaaro qiyaasta muruqyada ee 6 bilaha ama haddii aad jeclaan lahayd in aad lumiso lacagaha 20, hubso wakhtiga aad adigu sameysey waa suurtagal. Tababaraha shakhsigu ma awoodi doono inuu ku caawiyo haddii aadan ogeyn himilooyinkaaga.
9. Xusuusnow inaad sameyso Cardio
Waxaad rabtaa in aad haysatid 6-packet abdominals, biceps weyn, iyo lugaha awoodda leh? Ma heli kartid waxyaabahan adigoo miisaanka kor u qaadaya. Waa inaad xusuusataa inaad sidoo kale sameysid cardio. Waxaa jira mishiinno kala duwan oo laga heli karo naadiyada caafimaadka badankooda. Goobaha jimicsiga badankood waxay leeyihiin makiinado, kumbuyuutarro, baaskiil jimicsi, iyo mashiinnada rowing.
Waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaad ku gubto dufanka adiga oo samaynaya kardiyo badan oo ugu dambeyntiina ugu dambeyntii qeexitaanka muruqaagu wuxuu bilaabi doonaa inuu muujiyo.
10. Ha ku dhicin dabka dhexdiisa
Waxaad u baahan tahay inaad xasuusnaato in qof kasta oo qolka jimicsigu uu ku jiro xaalad isku mid ah, oo aanad walbana aheyn jirdhis jirka ah 20. Qof kastaa waa inuu helaa nooc ka mid ah goolasha, qof walbana waa inuu ku bilaabaa meel.
Ha ka werwerin dadka kale oo kaliya diirada saaraya hadafyadaada u gaarka ah oo sameeya jimicsigaaga. Haddii aad ka baqeyso inaad adigu isboorto adigu, jimicsi saaxiib ama aad jimicsi sameysid dad kale.
Ma jiraan talooyin kale oo farsamo? Faallada hoos ku xusan
March 10, 2016 Jimicsiga blog No Comment
Bowflex Dayaxa Saint Patrick Day 2016 Treadclimber Promo